Muxuu salka ku hayaa khilaafka ka dhex taagaan Xamsa iyo Khadijo? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Muxuu salka ku hayaa khilaafka ka dhex taagaan Xamsa iyo Khadijo?
Muxuu salka ku hayaa khilaafka ka dhex taagaan Xamsa iyo Khadijo?
Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya, Xamsa Saciid Xamsa ayaa bogga wasaaradda soo dhigay farriin uu ku sheegay in hoyga Ra’iisul Wasaaraha uu kula kulmay Khadiija Maxamed Diiriye, Wasiirka Arrimaha Gargaarka iypo Bini-aadamnimada.
Wuxuu Wasiir Xamsa sheegay: “Waxaan caawa hoyga Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kula kulmay wasiir Khadiija M. Diiriye, oo aan iscafinay, si wada jir ahna uga heshiinay wixii horey u dhacay”.
Balse wasiir Khadiija oo boggeeda gaarka ah ee Facebook uga falcelisay arrintaas waxay tilmaamtay in ay aqbashay raali gelin.
“Madaxdeyda Qaranka kama weyni, Raalli-gelina waa qaadasho. Walaalkey Hon Xamse cafis baad iga tahay Aboow,” ayey tiri.
Xafiiska Ra’iisul Wasare Rooble kama uusan hadlin arrintan, mana jiraan sawiiro la xiriira oo la baahiyay.
Maxaa horey u dhacay?
Waxaa baraha bulshada aad looga hadal hayaa wararka ay is weedaarsanayaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Xamsa Saciid Xamsa iyo Wasiirka gargaarka Khadiijo Maxamed Diiriye, kuwaas oo ku saabsan xafiiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo howsha wasaaraddaas.
Hadal-haynta ayaa billaabatay ka dib markii wasiir Xamsa uu sheegay in wasaaradda markii uu la wareegayey “uu waayay xafiis uu u shaqo tago”.
“Markii aan imaanayay wasaaradda xafiis ay ku shaqeyso ma heysanin, habeenkii la igu wareejiyay dad ayaan weydiyay oo aan ku dhahay, wasaaraddan aaway xarunteedi?” ayuu yiri wasiirka oo meel shir ah ka hadlayay, hadalkaas oo ay warbaahinta gudaha aad u tabisay.
Wuxuu intaas ku daray in shaqaalaha wasaaradda ay ku shiri jireen maqaaxi ama huteel.
“Muddo seddex bilood waxay igu qaadatay wasaarada in aan dejiyo, xafiis u raadiyo, shaqalaha howlgeliyo, si wasaaradda shaqadeeda ay u qabsato,” ayuu yiri wasiirku.
Wasiirka wuxuu sheegay in markii uu shaqada la wareegayay ay shaqaalaha wasaaradda ku jireen fasax sanad iyo bar ilaa iyo laba sano ah ayna qaadanayeen mushaarka.
Wasiirka Khadiijo Maxamed Diiriye oo uu xilka kala wareegay wasiir Xamsa, ayaa ka jawaabta hadalka ka soo baxay Wasiirka Ciyaaraha, waxayna farriin soo dhigtay barteeda Facebook, waxayna ka hadashay caqabadihi heystay wasaaradda dhalinyarada iyo fasaxa la geliyay shaqaalaha.
Waxay sheegtay in wasiirka uu ka mid ahaa golihii wasiirada ee fasaxay shaqaalaha maadama qaraxyo ay burbur gaarsiiyeen xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga.
Waxay baahisay warqad ay u dirtay xukuumaddii Xasan Cali Kheyre oo ay ku sharraxeysay caqabadihii la soo dersay wasaasaradda xilliggaas, waxaana kamid ahaa:
Xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa soo wajahay burbur uu keenay qaraxyadii ka dhacay xarunta iyo hareeraheeda.
In loo raadiyo goob ay wasaaradda ka howlgasho.
Halkaa kuma ekaan muranka labada wasiir u dhaxeeya, Khadiijo ayaa soo jeedisay eedeyn kale oo ay wasiirka ku eedeysay in uu weli haysto hanti ay leedahay wasaaradda Gargaarka oo labada wasiir ku kala wareegeen.
Wasiir Khadiijo waxay sheegtay in wasiir Xamsa uu weli iska heysto gaari ay leedahay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka, isla markaana uu ka dhego adeygay in uu ka soo wareejiyo.
“28-OCT/2020 ayuu igu wareejiyay xilka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka, ilaa haddana wuxuu heystaa gaarigii hantida wasaaradda lagu iibiyay, weliba iyadoo uu amar ku bixiyey Hanti-dhowraha guud ee Qaranka inuu soo celiyo. Illaa iyo haddana lagama haayo. Hanti Qarana waligeey la iguma eedeyn,” ayay wasiir Khadiijo ku soo qortay barteeda Facebook.
Illaa hadda xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya kama uusan hadlin arrintani.
Khilaafka Wasaaradaha Sidee loo maareeyaa?
Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya wuxuu BBC Somali u sheegay in Golaha Wasiirada ay leeyihiin xeer hoosaad la xiriira borotokoolka iyo hab-dhaqanka xubnaha ka tirsan.
“Wuxuu xeer hoosaadka taabanayaa shirarka Golaha Wasiirada iyo sida loo hadlayo,” waxaana jiro qaabab loo xalliyo khilaafaadka ka dhaca bannaanka shaqada.
Cabdiraxmaan Daahir wuxuu yiri: “Maadaama ay shaqo tahay waxa isu keena dadka, waa caadi in la kala aragti duwanaado.”
Balse marka khilaafka uu yahay mid ka dhaca gudaha shirarka Golaha Wasiirada “qaabka xallinta wuxuu yahay in uu Ra’iidul Wasaaraha uu soo kala dhexgalo, xubnaha kale ee wasiiradana kala raacaan aragtiyada.”
Haddii khilaafka uu yahay mid bannaanka ah “waa wax ka baxsan arrinta golaha wasiirada” in baraha bulshada iyo warbaahinta hadallo kulul ay isku dhaafsadan wasiirro).
“Qofka waxaa looga baahan yahay in uu noqdo tusaale uuna ilaaliyo maqaamka uu matalayo”, ayuu ku taliyay wasiirkii hore ee Waxbarashada.
Haddii khilaafka uu yahay mid ka dhacay bannaanka Golaha Wasiirada, wuxuu Cabdiraxmaan sheegay in arrintaas mararka qaar laga eegi karo dhanka anshaxa, waxaana sidaa ku soo faragelin kara qofka iyaga ka sarreeya ee ay hoostagaan.
“Haddii ay tahay wax ku saabsan shaqo, waxaa haboon in lagu xalliyo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha; waa haddii iyaga dhexdooda ay xallin waayaan. Haddii arrin shaqo laga dhigo mid shaqsiyadeed, oo ay ku dagaallamaan howshii, waa nasiib darro taas”, ayuu yiri.
Khilaafka waxaa qeyb ka noqday sida la isugu wareejiyay wasaaradaha iyo agabkii ay ku howlgalayeen.
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Soomaaliya,Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, wuxuu BBC Somali u sheegay in Wasaaradaha ay leeyihiin hab-raac ay wasiirrada isugu wareejiyaan.
“Khalad haddii uu dhaco oo ku saabsan sida wasaaradaha la isugu wareejiyo, waa in markiiba la saxo,” ayuu yiri.
Previous articleKenya oo qaaday tallaabo cusub oo SOOMAALIYA ku wajahan kadib bilo xiisad ah
Next articleSomaliland ma u gali doontaa Russia booskii Sudan si uu u hirgelo qorshihii fashilmay?